Ukuthumela nokubuyisa - Popular Jewelry
Ukuhanjiswa Kwamahhala Kwasekhaya (e-United States)
Jabulela ukuthunyelwa okujwayelekile kokujwayelekile okwenziwa ekhaya (i-USPS First Class) ngama-oda we- $ 100 noma ngaphezulu.
Imininingwane Yokuthumela Ngokujwayelekile
Sicela uvumele izinsuku zebhizinisi ezi-3-5 zokucubungula i-oda nokuqinisekisa. Vumela ezinye izinsuku zebhizinisi eziyi-7-10 zokulethwa kwasekhaya.
Asinacala kunoma yikuphi ukuthunyelwa okulahlekile, kwebiwe, noma okonakele. Konke ukuthunyelwa kuyakhokhelwa ngomshuwalense futhi umthengi uthatha yonke imithwalo yemfanelo yezicelo ezenziwe kumphathi wokuhambisa
Ngezizathu zokuphepha, singathumela kuphela ekhelini elinikezwe ekuphumeni.
Ngenxa yezizathu zokuphepha, kungenzeka singangeneli iphakethe noma siguqule ukulethwa kwalo uma selinikezwe umphathi. Uma udinga ukushintsha noma yiluphi ulwazi lwe-oda (ikheli lokuthumela / lokukhokha, imininingwane yokukhokha, njll.) Ungacela ukukhanselwa kwe-oda lakho ngokuxhumana nathi ngokushesha ku- info@popular.jew jewelry. Uma i-oda lakho likhanselwe ngempumelelo, ungathumela i-oda elisha elibukeziwe.
Inqubomgomo yethu ihlala izinsuku eziyi-15 ngemuva kosuku lokuthunyelwa. Uma kudlule izinsuku eziyi-15 selokhu sithumele iphakheji yakho, asikwazi ukunikela ngokubuyiselwa imali noma ngokushintshaniswa.
Izicucu ngokwezifiso ezifana nama-nameplates, izindandatho zamagama, namazinyo njll azibuyiselwe imali futhi ngeke zitholakale ukuthi zisetshenziswe njengesikweletu sesitolo. Ukwenza okuthandwa nguwe kanye nokuguqulwa (okuwukuthi, ukuqoshwa kwesongo; iketanga lokufaka ukhiye) esiqeshini kuzophinda kuvume inqubomgomo yokubuya. Sizokwazisa ngaphambi kwesikhathi sokuthenga uma into ethile ihlukaniswe kanjalo.
Izinto ezibuyisiwe zingaphansi kwemali engu-15% yokuqalisa kabusha ezodonswa embuyiselweni. Izindleko zokuthumela azibuyiswa.
Ukuze ufanelekele ukubuyiselwa, into yakho kufanele isetshenziswe futhi isesimweni esifanayo naleso oyitholile. Ukufakwa kwangempela kumele kufakwe.
Ukubuyiselwa kwemali (Uma kukhona)
Uma ukubuyiswa kwakho sekutholakele futhi kwahlolwa, sizokuthumelela i-imeyili ukukwazisa ukuthi siyitholile into (izinto). Sizokwazisa futhi ngokugunyazwa noma ukwenqatshwa kwemali yakho ebuyiswayo.
Uma imbuyiselo yakho ivunyelwe, imali yakho izocutshungulwa bese isikweletu sizosetshenziswa ngokuzenzakalela ekhadini lakho lesikweletu (noma enye indlela yokuqala yokukhokha) ezinsukwini ezimbalwa.
Ukubuyiselwa kwemali okwesikhashana noma okungekho (Uma kukhona)
Uma ungakayitholi imbuyiselo kungakapheli isonto lesaziso sokubuyiselwa kwemali, sicela uthinte inkampani yakho yasebhange kanye nekhadi lesikweletu / i-PayPal. Icubungula isikhathi sokubuyiselwa kwemali ingaba yinde; kungathatha isikhathi ngaphambi kokuba imali yakho ithunyelwe.
Uma ulandele le nqubo futhi namanje ungaziswanga ngembuyiselo yakho noma sicela ukuthola imbuyiselo yakho, sicela uxhumane nathi ku-freejew jewelrycorp@gmail.com.
Thengisa izinto (Uma kukhona)
Izinto kuphela ezithengwa ngentengo ejwayelekile yesitolo ezingabuyiselwa. Izinto ezithengiswayo azikwazi ukubuyiselwa imali.
Ukuhwebelana (Uma kukhona)
Sibuyisela izinto kuphela uma zinamaphutha noma zonakele. Uma udinga omunye esikhundleni, sithumele i-imeyili ku-info@popular.jew jewelry bese uthumela into yakho ku- 255B Canal Street New York, New York US 10013. Ukushintshana akuhambisani nemali engu-10% yokubuyiselwa imali.
Uma into imakwe njengesipho lapho ithengwa futhi yathunyelwa ngqo kuwe, uzothola isikweletu esigcwele ngenani lembuyiselo yakho. Lapho into ebuyiselwe isitholile, isitifiketi sezipho sizothunyelwa kuwe nge-imeyili.
Uma leyo nto ingazange imakwe njengesipho ngaleso sikhathi sokuthenga, noma uma lowo onikezwe isipho ephathiswe i-oda athumele kuye, sizothumela imbuyiselo kulowo ophethe izipho futhi uyena ozoba nesibopho sokuphatha kwesitifiketi sesikweletu / sezipho.
Ukubuyisa umkhiqizo wakho, sicela uxhumane nathi ku- info@popular.jew jewelry ngenombolo ye-oda naku- "RETURN" ngesihloko. Yize kungadingeki futhi ungafaka nesizathu sokubuya (silwela ukuthuthukisa insizakalo yethu futhi impendulo yamukelekile!)
Uma ukubuyisa sekuvunyelwe, thumela ukubuyiselwa kukheli elilandelayo:
255 ICanal Street unit B
ENew York eNew York US 10013.
Uzoba nesibopho sezindleko zokuthumela ezqoqelwe imbuyiselo. Izindleko zokuhambisa ngesikhathi sokuthenga azibuyiselwa. Izindleko zokuthumela ngokubuyayo zizodonswa kwimbuyiselo yakho.
Isikhathi esithatha isikhathi sokuthi into ebuyiselwe imali / eshintshanisiwe iyahluka ngokuya ngendawo yakho. Sizokunikeza imininingwane yokulandela ngomkhondo ngesikhathi sokuthumela (imvamisa nge-imeyili) uma kungenzeka.
Uma uthumela into ebiza ngaphezu kwe- $ 75, cabanga ukusebenzisa isevisi yokuhambisa etholakalayo futhi uthenge nomshuwalense wephakeji lakho. Asikwazi ukuqinisekisa ukuthi sizoyithola imbuyiselo yakho.